Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 13.10 Saucy Salamander | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander nahita ny hazavana ora roa lasa izay. Tahaka ny ataontsika isaky ny mamoaka an'ity distro malaza ity dia misy ireto zavatra tokony hataonao aorian'ny fanaovana a fametrahana hatrany am-piandohana.
sudo apt-mahazo mametraka gnome-session-flashback
sudo add-apt-repository ppa: ricotz / andrana sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3-staging sudo apt-mahazo fanavaozana sudo apt-mahazo mametraka gnome -shell gnome-tweak-tool gnome-shell-extensions
Mandehana any amin'ny làlan'ny birao Ubuntu 13.10
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
Mahaliana. Hita fa ny Unity dia azo ovaina amin'ny birao hafa nefa tsy maty amin'ny andrana.
Andao hojerentsika raha afaka manao tutorial momba ny fametrahana tsara ny lohahevitra ambiansy sy ny taratra aho ho an'ny KDE (sahala amin'ny Kanelina).
Raha izany, tsy afaka mampiasa lohahevitra Ubuntu ao amin'ny Debian Jessie miaraka amin'i Gnome aho (nihaona tamin'ny fiankinan-doha amin'ny lohahevitra maivana rehetra). Mihidy ho azy ny rindranasa gtk3, misy mahalala ve ny antony?
Tsy misy hevitra. Tsy dia mampiasa Debian Wheezy aho ary tsy nanana olana toy izany. Raha tianao dia azonao jerena ao forum amin'ny tranonkala natokana ho an'i Debian hitsaboana ny olanao milamina kokoa.
Eny eny, hijanona kely aho any aoriana, tsara kokoa ny maneho hevitra ao.
Google "gtype.c type id 0 dia tsy mety" ary ho hitanao ny valiny.
Misaotra ny vaovao, hijerena aho hahita izay hitako.
Epictor dia hoy izy:
sudo apt-get -f fametrahana na sudo aptitude -f fametrahana hametrahana ireo fiankinan-doha tapaka
Valiny amin'i Epictor
luiscuadrado123 dia hoy izy:
Alohan'ny hanaovana ny zavatra rehetra ... ny zava-dehibe indrindra, raha te-hihary fotoana isika, dia ny misafidy mpizara haingana indrindra ho an'ny toerana misy antsika (mazàna dia ny mpizara Ubuntu lehibe indrindra any Etazonia na ny mpizara lehibe eto amin'ny firenentsika, izay tsy ny haingana kokoa hatrany)
Mba hanaovana izany, mankany amin'ny fiavian'ireo rindrambaiko isika -> ao amin'ny takelaka «Software Ubuntu» -> «Misintona avy:» mifidy «hafa ..» isika ary avy eo amin'ny «Safidio ny mpizara tsara indrindra»
Hitsapa ny mpizara rehetra ary hisafidy ny haingana indrindra… raha vantany vao vita io dia afaka manao ny fanavaozana sy fanavaozana isika ary ho vita TSY MISY HATSARA! (indrindra ho an'ny firenena amerikana latina satria tototry ny lohamilina lehibe)
Valio amin'i luiscuadrado123
Mahaliana ... hotadidiko ao an-tsaina ...
Mpiara-miasa lahatsoratra mahafinaritra!
Raha ny tokony ho izy, zavatra tokony hatao aorian'ny fametrahana Kubuntu? «Saika tsy misy 😛
Toy izany koa no voalaza tao amin'ny MuyLinux, ho an'ny KDE 4.11. XD
Esory ny Akonadi sy ny Nepomuk raha tsy ampiasainao izy ireo.
Tsia, xD miaraka amin'ny KDE 4.11 dia tsy tsikaritrareo fa eo izy ireo, zara raha mandany loharano ary toy ny volom-borona ny zava-drehetra.
Tsapako fa rehefa nametraka ny Arch + KDE aho.
Farafaharatsiny ho ahy, rehefa manafoana ny akonadi (Nepomuk raha ampiasaiko aho) dia nidina hatramin'ny 470 ka hatramin'ny 200 MB kely ny fanjifana.
Ary oviana no tokony hatao aorian'ny fametrahana Kubuntu?
Hahaha fantatrao ve fa "gnome-session-fallback" nanova ny anarany amin'ity kinova farany ity? antsoina hoe "gnome-session-flashback" wtf? haha
Somary mampihomehy ihany, sa tsy izany? Saingy tsy ny Ubuntu ihany ... Nanova ny anarana ny GNOME ...
Torolàlana tena tsara sy feno hametrahana Ubuntu. Tena ratsy fa tsy nampiasa Ubuntu efa ela aho. Ny ahy, anio, dia i Debian Xfce na Manjaro Xfce, na OpenSUSE, na Chakra. Fa hisy olona mifanaraka aminy tsara. Etsy ankilany ary raha tsy diso ny famakiako ity Ubuntu ity dia hanana fanohanana mandritra ny 9 volana fotsiny, izay toa tsy dia hitako loatra.
Ny mpamily xorg edgers ati dia efa antitra be, 13.8 izy ireo fa diso aho! , efa roa volana izao no maty ilay ppa! Manoro hevitra anao aho ny hamorona ny deba amin'ny mpamily ary hametraka azy ireo.
Mahafinaritra ny mahita vahaolana azo atao "azo iainana", indrindra ho an'ireo vao manomboka. Raha manana ianao dia ampitao amiko ... dia hovahako ity lahatsoratra ity. 🙂
Ny programa ato amin'ity tranonkala ity dia mandeha ho azy:
Na hanova fonosana Arch repos ho .deb miaraka amin'ny vahiny ary omeo azy ireo mba tsy hijaly intsony ny ubuntueros.
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Xubuntu:
-Mametraka ny xubuntu-voafetra-fanampiny.
Ary ho an'ireo izay mampiasa Xubuntu ary maniry birao nentim-paharazana kokoa:
-Esory ny tontonana ambany ao amin'ny Configuration Management »Panel, azonao atao ihany koa ny mahazo io safidy io amin'ny fipihana eo ankavanana.
-Midira ny menio Whisker amin'ny fanampiana ireto ppa manaraka ireto:
... Avy eo manavao miaraka sudo apt-get-update ary apetaho amin'ny fanoratana sudo apt-mahazo mametraka xfce4-whiskermenu-plugin
-Nampian'izy ireo tao amin'ny fanahafana ny tontonana ihany izy io.
… Heveriko fa izany no izy 🙂
Ho an'ireo izay te "hanaraka" sary vitsivitsy dia avelako ho ao amin'ny pejiko ity lahatsoratra ity:
Ny tena marina dia tamin'ity indray mitoraka ity dia nihatsara kely ny ubuntu, tsy tokony nampidiriko be loatra, farafaharatsiny tao amin'ny solosaiko no nahitako ny fiovana tamin'ny fanombohana sy ny fanidiana ary ny firaisan-kina dia niasa haingana kokoa tamin'ity kinova 13.10 ity, fa ny dikanteny tsirairay kosa dia mitondra ny lesoka ary ny olany, satria ny fonosana sasany dia nambara fa lany andro ary misy korontana amin'ny fiankinan-doha indrindra raha te hametraka zavatra mifandraika amin'ny tranomboky ia32-libs ianao, fa raha tsy izany dia tsara izany, Salama
Tsy mandeha amin'ny pc ny Ubuntu ... mitranga izany hatramin'ny 13.04, midina, andramo ny 13.10 dia hitanao ny olana ...
Manana fanontaniana aho manantena aho fa hanampy ahy ianao ary azafady:
Amin'ny solosaina finday izay nametrahako Kubuntu hatrany amin'ny 11.04 ka hatramin'ny 13.04 tsy nisy olana, izao te-hametraka 13.10 aorian'ny fiandohana mivantana aho ary mampiseho ny famafazana, lasa mainty ny efijery ary tsy manao na inona na inona, tsy misy tontolo iainana sary ary tsy misy disk hita ny hetsika; efa nitranga tamiko io satria te-hametraka ny beta sy beta RC aho, ary koa rehefa te-hanavao ny 13.04 aho dia nisintona ireo fisie fa tsy natomboka, dia nanandrana niaraka tamin'i Fedora, Rosa, Pear aho ary nametraka azy ireo tsy nisy olana saingy tamin'ny Kubuntu 13.10 dia tsy afaka aho.
Fantatrao ve ny vahaolana?
Narahiko ny torolalany ho an'ilay taratasy, ary rehefa niditra aho ... dia nikotrana ny rafitro ary tsy niditra mihitsy izy ... Nisy zavatra hafa koa ve nanjo ny hafa?
Nitranga tamiko ihany koa izany, taorian'ny nametrahana Kubuntu 13.04 rehefa manavao ny 13.10 aho dia manomboka fa mainty tanteraka ny écran, satria efa nanandrana nanao fametrahana madio 13.10 aho ary tsy afaka ihany koa; Mila mametraka Mageia 4 alpha 3 aho izay mandeha milamina miaraka amin'ny kernel 3.12
Mety ho voafaritra kokoa ve ianao ?? Inona no nataonao?
tsy tokony hatao intsony ve ny getdeb sy ny playdeb ???
Raul sierra dia hoy izy:
Ho antsika izay tsy manam-pahaizana dia tena sarobidy ireo lesona ireo. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Raul Sierra
fonosana fivarotana firaisan-kina izao dia nantsoina firaisana-sehatra-tokantrano
toy izany tsy mandeha ny baiko apetrakao amin'ny fanadiovana ny tsipika, ny fomba hanaovana izany ao amin'ny Ubuntu 13.10 Saucy Salamander dia miaraka amin'ity baiko ity:
$ gsettings set com.canonical.Unity.Lens-disksopa "['more_suggestions-amazon.scope']"
Ho ahy dia aleoko toy izao:
$ gsettings set com.canonical.Unity.Lens disable scords «['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions- ebay.scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] »
Misaotra anao! Efa nanova azy aho. 🙂
Misaotra amin'ny mpitari-dalana feno toy izany 🙂
Ny hatao Ataovy endrikao ary apetraho indray ilay teo aloha, satria ny fahasoavana dia ny hadisoany!
- Tsy azoko atao ny mametraka ny mpamily nvidia amin'ny tanana (tsy nahomby ny fanangonana).
- Nautilus dia voahidy amin'ny clamp ary mampiseho ahy ireo rakitra miafina foana izany.
- Totem tsy mametraka plugin (alohan'ny eny).
- Rehefa manokatra combobox avy amin'ny google chrome dia indraindray miseho amin'ny tranokala hafa.
- Tsy mandeha i Kazam sy avconv.
Famerenana kely -> http://www.youtube.com/watch?v=g-WbWXvmfWg
Ry zalahy, iray na roa volana teo ho eo dia nanova ny fahitalavitra aho ary noho ny tsy niadiako tamin'ny hdmi dia nandao an'i Debian aho taorian'ny efa ho herintaona nampiasako azy ary nanapa-kevitra ny hametraka ny Ubuntu Gnome 13.04 aho.
Nisondrotra ho 13.10 tamin'io andro io ihany aho, fa na dia talohan'ny famoahana azy aza tsy nijanona ho Beta intsony.
Tsy te-hanitatra ny tenako loatra aho, milaza fotsiny fa ny Ubuntu vao navoaka sy nametraka dia mety ho aretin'andoha lehibe. Ho ahy manokana, ary raha mahasoa olona iray ny torohevitra, dia holasako ny fotoana anohanana isaky ny kinova, izay mifanohitra amin'izay heverin'ny olona fa tsy 6 volana fa 9 volana. Nametraka endrika sy nametraka indray aho tamin'ny 13.04 hatramin'ny febroary, tsy te hahalala na inona na inona momba ny Ubuntu Gnome 13.10 izao, dia toy ny ass amin'ny 13.10.
Miarahaba anao compis.
Mamaly an'i Distrozao
Cj.aibar76 dia hoy izy:
Valiny amin'ny Cj.aibar76
gasilva dia hoy izy:
Tuto tsara, fa ny zavatra tokana tsy azoko dia ny fomba Downgrade ny mpizara X, ny karatra ataoko dia ATI Raedon X1200 ary sarotra ny miasa indraindray. Tiako raha afaka manampy ahy amin'izany ianao sy ny kinova tokony hataoko ...
Mamaly an'i gasilva
ary mbola tsy azoko atao ny misintona ny ndiswrapper na ireo mpamily linux amin'ny adapter USB wi-fi. Misy mahalala ve raha manana olana amin'izany ity kinova ity?
Chelis dia hoy izy:
Tena nilaina be tamiko io, indrindra ny fametrahana ny Codec.
Tsy nametraka azy ireo aho tamin'ny voalohany ary tsy nahalala ny fomba fanamboarana azy.
Valiny amin'i Chelis
Lisitry ny fandraisana anjara tsara, isaky ny mandefa distro vaovao ubuntu ps izy ireo hanandramana azy, antenaiko fa mbola handray anjara toa ny maro hafa ihany ianareo.
Fanohanana tsara ho antsika izay vao nanomboka… .. Misaotra
Mayorga Barrera dia hoy izy:
Manana olana aho, tsy nahomby ny karatra tambajotram-pifandraisana ary nametraka karatra tambajotra ENL832-TX-ICNT PCI aho ary tsy manana mpamily, antenaina misy afaka manampy ahy, mametraka ubuntu 12.04. Misaotra anao
Valiny tamin'i Mayorga Barrera
andrea g. dia hoy izy:
Salama tontolo andro! Miala tsiny fa manana olana amin'ny tahiry fanalahidy Default aho, ao amin'ny Ubuntu 13.10 Manoratra ny tenimiafiko aho ary manondro ilay diso, fa raha ampidiriko ao amin'ny terminal-ko dia mety amiko izany, raha miditra ny teny miafin'ny mpampiasa aho dia mety amiko. ! fa tsy ao anaty petra-bola ao anaty kavina, azafady !!! Vonjeo!!!!
Mamaly an'i andrea g.
Izy ireo dia ny lakilen'ny 2 hafa! 🙂
Tsy tadidinao ve ilay napetrakao?
Angamba tokony manandrana mamafa azy ianao.
Salama, manana solaitrabe Radeon HD 7850 aho izay amporisihinao hampiasa ireo mpamily tompony na maimaim-poana?
carcheky dia hoy izy:
Miarahaba anao noho ny lahatsoratra, tena feno ary toa intuitive, raha vantany vao vita ny fametrahana dia hanaraka azy aho, misaotra betsaka!
Mamaly an'i carcheky
Borja HA dia hoy izy:
Torolàlana tena tsara, misaotra betsaka mpiara-miasa
Valiny tamin'i Borja HA
Salama namana, tutorial tena tsara, ampio fotsiny fa ny fglrx-legacy dia mifanaraka amin'ny andiany 12.10 araka ny filazan'ny mpanoratra ny repository.
Eto aho manandrana mianatra s / linux. Niresaka momba ny "terminal" ianao tamin'ny voalohany fa tsy haiko hoe aiza no ahazoako azy, mividy azy, mahita azy…. Nijanona aho mandra-pahatongan'izany. Ary tsy hoe kamo aho na adala, tsy haiko fotsiny.
Ekeko izany. Manazava aho fa tsy misy fanazavana amin'ny antsipiriany momba izany. Ho an'ity sy ny tsy fahazoan-kevitra mitovy / mitovy amin'izany; no anton'ny maro izay mivily (miverina) mankany GNU / LINUX.
Misy olana amin'ny efijery feno ao amin'ny Chrome? Eto ny vahaolana
Nanavao ny torolalana ho an'ny mpiara-miasa